Joan Laporta oo carabka ku adkeysay baahida loo qabo in Barcelona ay ku dhaqaaqdo sameynta hal arrin muhiim u ah kooxda – Gool FM
Joan Laporta oo carabka ku adkeysay baahida loo qabo in Barcelona ay ku dhaqaaqdo sameynta hal arrin muhiim u ah kooxda
Dajiye December 24, 2019
(Barcelona) 24 Dis 2019. Madaxweynihii hore Barcelona ee Joan Laporta ayaa wareysi uu ku bixiyay “RAC” wuxuu kaga hadlay dhowr arrimood ee quseeya mustaqbalka Blugarana, iyo ujeedkiisa ah inuu u tartamo doorashooyinka soo socda ee xilka madaxtinimo ee kooxda.
Joan Laporta ayaa wuxuu ku cadeeyay hadaladiisan baahida loo qabo in Barcelona ay u cusbooneysiiso qandaraaska Lionel Messi, kaasoo dhacaya bisha June 2021.
Messi oo dhowaan ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or, wuxuu halkiisa ka sii waday inuu qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigo kooxda Blugarana, isagoo dhaliyay 15 gool 18 kulan uu saftay ilaa bilowgii xilli ciyaareedka.
Laporta ayaa wareysigan uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan u maleynayaa inaan heysan doono Lionel Messi muddo dheer, isagu wuu ogaa arrintaas, wuxuuna garanayaa sida loo sameeyo qaab ciyaareed cajiib ah, wuxuuna u ciyaaraa kooxda darteed, wuxuu muujiyay taas, waana in la cusbooneysiiyo qandaraaska Lio xilli kasta”.
“Ujeeddooyinka dhaqaale ee loo baahan yahay in lagu cusbooneysiyo heshiiska waa in la sameeyaa, dhanka Isboortiga iyo bini’aadanimada wuxuu ku dareemayaa raaxo kooxda Barcelona, waana in lagu qadariyaa inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican adduunka iyo ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda”.
Intaas kaddib Joan Laporta ayaa la weydiiyay su’aal ku aadan hadii uu doonayo inuu qeyb ka noqdo doorashooyinka soo socda ee xilka madaxtinimo ee kooxda, si uu xilka kala wareego madaxweynaha haatan haya talada kooxda ee Josep Maria Bartomeu.
“Haddii aanan helin murashax i qancin kara, isla waqti xaadirkaana aanan helin, sidoo kale aan dareemo xamaasad, waxaa xaqiiqo ah inaan isku sharixi doono xilka madaxtinimo ee kooxda Barcelona”.
Kooxda Chelsea oo la siiyey fursad ay kula soo saxiixan karto Isco… (Sidee ayay wax u jiraan?)